Baarlamaanka Soomaliya oo maanta cod u qaadaya xukuumada - BBC Somali
Baarlamaanka Soomaliya oo maanta cod u qaadaya xukuumada
6 Disembar 2014
Image caption Baarlaamka Soomaliya ayaa mudaba isku khilaafsanaa fadhiga baarlamaanka
Golaha baarlamaanka Soomaliya ayaa maanta waxay sii wadayaan dood ay ka yeelanayaan kalsoonida xukuumada ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. sida lagu wado waxaa loo balansan yahay in doodaka dib cod loo qaado in xukuumada ay sii shaqaynayso iyo in kale. sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ugu dambayn galabnimada maanta ayaa cod loo qaadi doona xukuumada.
Khilaaf mudaba ka dhex taagnaa golaha baarlamaanka ayaa markii dambe ku heshiiyey in si nabad ah uu baarlamaanka u fariisto kana dooda codka kalsoonida ee xukuumada. khilaafkan ayaa salka ku hayay is afgaran waa u dhaxeeyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha.
Sharciyan xukuumada waxay codka kalsoonida ku weynaysaa 139 cod. taageerayaasha labada dhinacna waxay sheegayaan inay haystaan cod ku filan. hadii ra'iisul wasaaraha uu maanta waayo codka baarlamaanka waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii labaad ee labo sano gudahooda xilka laga qaado